गण्डकी प्रदेशसभा : कोरोना भाइरसको नाममा मूल्यवृद्धि अत्यधिक - नेपालबहस
गण्डकी प्रदेशसभा : कोरोना भाइरसको नाममा मूल्यवृद्धि अत्यधिक
| २०:०३:४९ मा प्रकाशित
२८ पुष, गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत आजको बैठकमा मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ । प्रस्तावको छलफलमा अधिकांश सदस्यले मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परेको बताउँदै यसको नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले कोरोनाका कारणले मुलुकमा भएको बन्दाबन्दीबाट निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रलगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । कोरोनाका कारण ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर गर्दा आम्दानीमा ह्रास आएको, बेरोजगारी समस्या बढेको र मनोमानीरुपमा मूल्यवृद्धि भएको बताउँदै उनले यसले जनतालाई प्रत्यक्ष मार परिरहेको बताए।
जथाभावी गरिएको मूल्यवृद्धिको सरकारबाट अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै उनले दोषीलाई कारवाही नभएको बताए । बजारमा कतिपय सामग्रीमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी महँगी भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले महँगीसँगै देखिएको कालोबजारी नियन्त्रणमा आउन नसक्दा सर्वसाधारण नराम्ररी प्रभावित बनेको बताए । उत्पादित वस्तुमा कृषक तथा उपभोक्ता ठगिएको र विचौलियाले फाइदा लिने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य धनमाया लामा पोखरेलले कोरोना भाइरसको नाममा मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको बताए । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण अत्यधिकरुपमा प्रभावित भएको बताउँदै उनले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा पनि मनोमानी बढिरहेको छ भने। प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बताउँदै उनले १२५ प्रतिशतभन्दा बढी महँगीको मारले सर्वसाधारण पीडित बनिरहेको बताए ।
अर्का सदस्य ओमकला गौतमले विपन्न नागरिकका लागि सुपथ मूल्यको कार्ड वितरणको कार्यक्रम ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउए। बढिरहेको मनोमानी मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणका साथै सुपथ मूल्य पसल खोलेर जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । कोरोना महामारीसँगै माक्स, स्यानेटाइजरलगायतको खरीदमा पनि भ्रष्टाचार गरिनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले बजारमा अराजकता छाएको र बजार सरकारविहीनताको अवस्थामा रहेको बताए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापा, इन्द्रधारा विष्ट, मनकुमारी गुरुङ, प्रभा कोइराला, जनकलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा र कृष्ण थापाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । बजारको अनुगमनलगायतका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उहाँले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको सिधै बजारीकरणतर्फ पनि सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री लम्सालले बजार अनुगमन नियमावली तयारी गरी अनुगमनको संयन्त्रलाई बजार अनुगमनमा पठाउने गरिएको बताए । भारतमा पनि मूल्यवृद्धि भएका कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा व्यापारी नाफा मात्रै गर्ने नभई इमान्दारिता पनि देखिएको बताउँदै उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढिरहेको बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी माघ ४ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
भक्तपुरमा पहिलो चरणमा चार हजारलाई खोप दिइने १३ घण्टा पहिले
खोप अभियानले स्वास्थ्यकर्मी खुशी १३ घण्टा पहिले
विश्वका ८५ भन्दा धेरै गरिब मुलुकमा कोभिड–१९ खोप सर्वसुलभ नहुने १४ घण्टा पहिले
आजदेखि एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान शुरु ९ मिनेट पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? २० मिनेट पहिले
बझाङमा खुँडा प्रहार गरेर युवकको हत्या, एक पक्राउ १७ घण्टा पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय बिहुँकोट विकास मञ्च गठन १६ घण्टा पहिले
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई जर्मनी भ्रमणका लागि निमन्त्रणा २३ घण्टा पहिले
वामदेवले थाले एकता अभियान १७ घण्टा पहिले
स्वास्थकर्मीबाट कोरोना खोप लगाउन सुरु १८ घण्टा पहिले
उखु किसानलाई ५४ करोड बढी बक्यौता रकम भुक्तानी १४ घण्टा पहिले
गृहनगरमा ट्रम्पले खोले पूर्व राष्ट्रपतिको कार्यालय १ दिन पहिले
चित्त दुखाएर होइन, मन जितेर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्छ : नेता पौडेल ३ दिन पहिले
संसद् बैठक तत्काल बोलाइयोस्ः अर्याल ७ दिन पहिले
चालकसँग घुस रकम लिने तीन जना प्रहरी निलम्बनमा ६ दिन पहिले
एचआइभी संक्रमितको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा ४ दिन पहिले
कर्णालीमा आइपुग्यो कोरोना खोप ‘कोभिशिल्ड’ २ दिन पहिले
पत्रकारलाई मिसन मिडिया क्लबले दियो काेरोना बीमाको रकम ४ हप्ता पहिले
लिङ्ग परीक्षणपछिको गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा ७ दिन पहिले
क्राइम ब्रान्चको नाम पर्सा प्रहरी तस्करी गराउन मै ब्यस्त ४ हप्ता पहिले
सल्लागाउँको ५० घरपरिवारले तरकारी र पशुपालनलाई मुख्य आयस्रोत बनाउँदै २ दिन पहिले
क्रसर उद्योगीको मनोमानी बढ्दै : राजस्व नबुझाई खोला उत्खनन ४ हप्ता पहिले
शेयरबजारमा पुनः नयाँ रेकर्ड, कारोबार कति ? २ हप्ता पहिले
दुर्घटना, विपद् र आत्महत्याका शव परीक्षण गर्न समस्या २ हप्ता पहिले
सबैलाई लोभ्याउने कमलपोखरी पूर्वाधार निर्माणको पर्खाइमा १ हप्ता पहिले
चाबहिल–साँखु सडकखण्ड : धुलोले आक्रान्त ट्राफिक प्रहरी २ वर्ष पहिले
कोरोनाको जोखिम नै सकिएजस्तो गरी चहलपहल बढ्यो ६ महिना पहिले
कोरोना भाइरसको जोखिममा युवा, सचेत हुन डब्लूएचओकाे सुझाव १० महिना पहिले